Ikhabethe elithokomele elinobhavu oshisayo wangasese kanye nokubuka! - I-Airbnb
Ikhabethe elithokomele elinobhavu oshisayo wangasese kanye nokubuka!
Manhattan, Montana, i-United States
Ikhabethe lethu lezivakashi elinohlaka lwamapulangwe eliyingqayizivele lisendaweni eyimizuzu eyi-15 ngaphandle kwemingcele yedolobha lase-Bozeman. Chitha iholide lakho lapha futhi uzojabulela indawo yakho ethokomele enokubukwa okuhle, kanye nemisebenzi eminingi unyaka wonke eGallatin Valley!
Ihlotshiswe ngokomsebenzi futhi yakhiwe ngobungcweti, indlu yethu yezivakashi isendaweni yezwe imizuzu eyi-15 ngaphandle kwase-Bozeman. Jabulela ukubukwa okumangalisayo Kwezintaba ZaseBridger, Spanish Peaks, namagquma amahle namasimu akuzungezile, kuyilapho ukwazi nokufinyelela kalula emisebenzini eminingi eseduze neGallatin Valley!
Indlu yethu yezivakashi iwuhlaka lwamapulangwe olusebenza kahle kakhulu, olunemishayo eveziwe yonke indawo. Inamazinga amathathu, negumbi lokulala elisezingeni eliphansi, indawo yokuhlala kanye negumbi lokugezela elisezingeni elikhulu, kanye nendawo yokuphumula eyengeziwe endaweni ephezulu, yengqikithi yesikwele esingamamitha-skwele angama-585.
Igumbi lokulala lithokomele futhi liyimfihlo linokukhanya kwemvelo okuchichimayo kanye nokungena kwalo. Leli gumbi lihlala lipholile ehlobo futhi linehitha yalo engaphakathi odongeni ebusika, ngakho uzoqiniseka ukuthi uphumule ngokunethezeka. Nethezeka ubukele isibuko esiyisicaba se-Roku TV - sihlelele ukungena eziteshini zakho ozithandayo zokubhalisele! Futhi sinesidlali se-BluRay - amamuvi ambalwa ahlinzekwa, futhi amakhikhikhi we-Redbox ayatholakala eduze uma ufuna ukubuka okwengeziwe.
Siphinde sibe ne-inthanethi ye-wi-fi, nesipikha sezinyo esiluhlaza ukuze uphathe umculo wakho.
Indlu yokugezela inama-skylight kanye neshawa yokuhamba, enamakhabethe enziwe ngokwezifiso neziqongo zokubala zikakhonkolo zeze. Inezitezi ezifudumalayo ezine-thermostat yangaphakathi kwegumbi ongakwazi ukuyilawula - ilungele ubusika baseMontana.
Indawo yasekhishini inosinki ogcwele usayizi, isiqandisi esingaphansi kwekhawunta, i-toaster, izitsha, izitsha, kanye nomenzi wekhofi obaluleke kakhulu! Kukhona nohhavini we-microwave, olungele ukushisisa ukudla okulula nokusalayo. Amakhabethe enziwe ngokwezifiso, futhi i-counter top inokhonkolo ngezinsalela ezifakiwe.
Uma udinga nje ukuphumula futhi uphumule, jabulela ubhavu oshisayo oyimfihlo osegcekeni lapho ungathola khona ukubukwa emini, nezinkanyezi ezimangalisayo ebusuku! Kukhona nezikhala ezinkulu zasendlini ongakhetha kuzo kusuka esitezi esikhulu noma phezulu ku-loft. Womabili amaleveli anezitezi zokhuni kanye nokukhanya okuhle kwesimanje ukwenza indawo ethokomele yokugoqa incwadi nengilazi yewayini. Kukhona nesitofu segesi esithandekayo kanye nezitebhisi ezivunguzayo eziyingqayizivele ezengeza umlingiswa omuhle wale ndlu!
Nethezeka lapha ebusuku, kodwa qiniseka ukuthi udlala usuku lonke - kuningi okumelwe ukwenze e-Gallatin Valley, futhi cishe yonke into ingaphansi kwehora ngemoto ukusuka endlini yezivakashi. Ukufinyelela kokudoba i-Gallatin River kanye negalofu e-Cottonwood Golf Course kuqhele ngamamayela ambalwa. Phakathi nemizuzu engu-25 ungase ucwile e-Norris Hot Springs ngenkathi ulalele umculo obukhoma, noma ujabulele isidlo sakusihlwa nokuzijabulisa endaweni yedolobha lase-Bozeman. Futhi esikhathini esingaphansi kwehora ungaba semithambekeni kwenye yezindawo zokungcebeleka eqhweni ezimbili eziseduze: i-Bridger Bowl noma i-Big Sky!
Ngokuhlala kwakho eSouthwest Montana, indlu yethu yezivakashi iyindlela engcono kakhulu kunegumbi lehhotela. Bhukha manje ukuze ubalekele kukho konke, futhi ube seduze kwakho konke!
Kudingeka ukuhlala okungenani ubusuku obu-2.
Ukuhlala ubusuku obubodwa kuyatholakala uma ukubhukha kungakapheli iviki noma amabili, inani eliphezulu lizokhokhiswa.
Le yimpahla ENGABHEMAYO.
Sicela ushayele ngemibuzo!
UJeff kanye noJen S.
Umuzi wethu usezweni lasepulazini lase-Montana - izindawo ezivulekile, amagquma, nesibhakabhaka esikhulu - okwenza kube nokubukwa kwezinkanyezi okuhle ebusuku! Maduzane ungabona amapulazi/amapulazi anezinkomo eziklabile, izinkomo zobisi, izimbuzi, izimvu nezingulube, kanye namasimu agcwele izitshalo ezifana nokolweni, ibhali, i-alfalfa, ummbila namazambane! Amasimu avame ukudweba izinyamazane eziningi, oklebe, izinkozi nezikhova!
Sithatha ubumfihlo bakho njengento ebalulekile, ngakho-ke ngeke singqongqoze emnyango wakho noma sikuhluphe. Ezikhathini eziningi asiziboni ngisho izihambeli zethu ngenxa yemvelo yangasese yendlu yezivakashi, kodwa sicela ukhululeke ukuza uzobingelela. Sithanda ukuhlangana nezivakashi!
Sithatha ubumfihlo bakho njengento ebalulekile, ngakho-ke ngeke singqongqoze emnyango wakho noma sikuhluphe. Ezikhathini eziningi asiziboni ngisho izihambeli zethu ngenxa yemvelo y…